Kuleylkii ugu horreeyay ee Isbaanishka wuxuu geliyaa 34 gobol | Saadaasha Shabakadda
Kuleylka ugu horreeya ee Isbaanishka wuxuu heegan geliyaa 34 gobol
Monica Sanchez | | Mawjadaha kuleylka
Ku gudbaya kuleyl? Dhowr maalmood heerkulka Spain wuxuu gaarayaa heerkul heer sare ah inta u dhaxeysa bilaha XNUMXaad / XNUMXaad marka loo eego qeybtii labaad ee Juun. Heerkulka u kici doona ilaa 42 darajo Celsius gobollo badan, sida ka jirta koonfurta Andalusia ama Castilla La-Mancha.
In kasta oo xagaagu si rasmi ah u bilaabmayo Juun 21, haddana waxaad moodaa in sannadkan lix maalmood ka hor, taas oo ah dhibaato, gaar ahaan carruurta saacadaha iskuulka lagu jiro. Suuxdinta dugsiyada ayaa ahayd noticia. Marka ay aad u kulushahay, waxa ugu muhiimsan ayaa ah in la qaboojiyo, gaar ahaan markay tahay carruurta aan qaan gaarin. Tani waa cimilada Spain maalmahan.
1 Saacadee maanta lafilayaa?
2 Iyo maalmaha soo socda?
3 Iyo jasiiradaha Canary?
Saacadee maanta lafilayaa?
Saadaasha heerkulka ugu badan Jimcaha Juun 16, 2017. Sawirka - AEMET
Bishii Juun 14keedii, Wakaaladda Saadaasha Hawada ee Gobolku waxay siisay ogaysiis: mawjad kuleyl ah waxay saameyn ku yeelan kartaa afar-geesoodka koonfur-galbeed ee jasiiradda iyo bartamaha peninsula, iyadoo leh heerka suurtagalnimada in ka badan 80%. Taariikhda bilaabashadu waxay ahayd Juun 15, iyo dhammaadka taariikhda waxay ahayd Isniinta soo socota, Juun 19. Oo sidaasay noqotay.
Maanta gobolada Córdoba, Granada, Huelva, Jaén iyo Seville ayaa hada kujira heeganka liinta (Khatar weyn) sababo la xiriira ugu badnaan oo u dhexeysa 38 iyo 41ºC, halka Cádiz ay ka jirto digniin huruud ah (halista) oo ah qiimayaasha 38ºC, sababo la xiriira dabaysha Levante ee aagga marinka iyo dhacdooyinka xeebta awgeed.
Castilla La-Mancha waxay leedahay digniin liin dhanaan ah heerkulka ilaa 40ºC ee dooxooyinka Tagus iyo Guadiana. Dhanka kale, Madrid waxay haysaa digniinta liinta ee aagga magaalooyinka waaweyn, oo leh qiimayaal gaaraya 39ºC; iyo en Extremadura wuxuu sii wadaa digniinta oranjiga ah ugu badnaan 42ºC.
Iyo maalmaha soo socda?
Saadaasha heerkulka Sabtida Juun 17, 2017. Sawirka - AEMET
Saadaasha heerkulka ee Axadda Juun 18, 2017. Sawirka - AEMET
Dhammaadka usbuuca dhammaadkiisa Jasiiradda Iberia iyo Jasiiradaha Balearic labaduba waxay kusii socon doonaan casaan kulul. Maalinta Sabtida ah heerkulku wuu sii socon doonaa wuqooyiga Peninsula, Axadana wax yar ayey ka kici doonaan Alto Ebro iyo aagagga kale ee waqooyiga. Koonfur-bari ee jasiiradda iyo bariga jasiiradaha Balearic, heerkulka ayaa bilaabi doona inuu hoos u dhaco.
Iyo jasiiradaha Canary?
Sawir - AEMET
Jasiiradaha nasiibka u yeeshay waxay umuuqdaan inay xoogaa ka takhalusiyaan kuleylka daran. Heerkulka ugu sarreeya waa qiyaastii 30-32ºC, tan ugu yarna waa 10-12ºC. Isbedelo waaweyn lama filayo maalmahan.
Marka waxba, biyo badan oo sug mawjadda inay dhaafto 🙂.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Mawjadaha kuleylka » Kuleylka ugu horreeya ee Isbaanishka wuxuu heegan geliyaa 34 gobol
Qarsoodiga daruuraha noctilucent la waayey ama CEN iyo BILAASHA ASALKA EE MAGACA KHILAAFKA kululaynta:
Juun 15, 2017 - Dabayaaqadii Maajo 2017, kormeerayaasha Yurub waxay bilaabeen inay arkaan janjeeraha buluugga ee korantada ka cunaya dhinaca galbeed qorrax dhaca. Xilligii xagaaga ee daruuraha noctilucent (CEN) ayaa sida muuqata bilaabmay. Daruuraha u ekaanta badan waxay caadi ahaan kordhiyaan muuqaalkooda toddobaadyada isla marka ugu horeysa ee aragga. Sannadkan, si kastaba ha ahaatee, wax qarsoodi ah ayaa dhacay. Halkii aad sare uga kici lahayd, daruuraha waa la waayey. Intii lagu guda jiray labadii toddobaad ee ugu horreeyay Juun 2017, sawirrada EBEL ee laga helo CEN waxaa laga helay Spaceweather.com - waa wax aan dhicin ku dhowaad 20 sano.
Xagey aadeen Baarayaasha waxay si fudud u ogaadeen: Waxaa jiray "mowjado kuleyl ah" aagga cirifka ah ee mesosphere, oo ah gobol ka mid ah jawiga sare ee Dunida halkaasoo ay ka sameysmaan CENs, heer kulka diirranna wuxuu tirtiray daruuraha.
Lynn Harvey oo ka tirsan Jaamacadda Colorado's Laboratory ee Hawada iyo Hawada Fiisigiska ayaa daahfurtay iyadoo la adeegsanayo xogta heerkulka ee Microwave Probe ee saaran dayax gacmeedka NASA ee Aura. Bilowgii bishii Meey, meeraha xagaaga ee shucaaca qorraxda wuu qaboobayay, sidii caadada u ahayd, wuxuu ku soo dhowaaday heerkulka hooseeya ee looga baahan yahay CEN, ayay tiri “Laakiin miyaadan ogeyn? Isla 21-kii Maajo kadib, qaboojinta heerkulka ayaa istaagay cirifka woqooyi! Xaqiiqdii, waxay diirisay aagagga darajo ama laba ka sarreeya usbuuca soo socda. Kuleylka ayaa loo tarjumay 2017 inuu ahaa xagaagii ugu DAMBEEY sanadihii lasoo dhaafay meesopause
Waxay ku sharraxaysaa qalooca cas ee qorshahan 10-ka sano ee isbeddelka heerkulka meospheric polar:
Heerkulka diiran ee jooggaan sare ayaa ku xun CEN. Daruuraha barafku waxay samaystaan ​​83 km oo dhulka korkiisa ah marka heerkulka hawadu hoos uga dhaco 145 K (-128 C), taasoo u oggolaanaysa mootoolojiyada biyaha yar inay isku soo uruuriyaan oo ay ku shiishoobaan meelaha qiiqa meteor. Xitaa dhowr darajo oo kululaynta ayaa ku filan inay baabi'iso daruuraha jilicsan.
"Ma garanayno sababta meerisku u kululaatay, laakiin dhammaan tilmaamayaasha waxay tilmaamayaan kororka imaatinka Cosmic-Rays dibedda ee Nidaamka Qorraxda," ayuu yiri Cora Randall, oo ah guddoomiyaha Jaamacadda ee Waaxda Cilmiga iyo Teknolojiyada ee Colorado. “Waxay u badan tahay inay tahay geedi socod adag oo waliba ku lug leh faafinta mowjadaha cimilada cimilada, taas oo saameyn ku yeelata qulqulka hawada ee jawiga sare. Waan fiirineynaa sidaas darteed sidoo kale wuxuu xiriir la leeyahay Solar-Cycle-ka hadda jira oo si aan caadi ahayn u hooseeya. "
Dhanka kale, hirarka kuleylka ayaa laga yaabaa inuu soo dhammaado. "Toddobaadkii la soo dhaafay, mesopause-ka cirifka woqooyi wuxuu bilaabay inuu mar kale qaboojiyo," ayuu yiri Harvey. Tani waxay ka dhigan tahay in CEN-ta intaanay soo noqon ay dhakhso u soo kaban doonto, maaddaama heer-kulku sii socdo inuu ku sii dego aaggaas oo ah cimilada woqooyi. Ilaaliyeyaasha hawada sare ee Sky High waa inay feejignaadaan laydhadhka korantada ee ka soo gurguuranaya qorraxda sii dhaceysa habeenada soo socda xagaaga
Ku jawaab ANTHONY LOPEZ
Miisaaniyadda lagula dagaallamayo isbedelka cimilada ayaa hoos u dhacday 16%
Waa maxay xilliga xagaaga?